Ndị agha Ndị Kraịst na-aga n'ihu na-eso ụzọ Class # 183
Otu esi merie onwunwa, nkebi 59
Nabatara Ndị agha Ndị Kraịst Ndị Na-eso Ụzọ Na-eso Ụzọ. Abụ m Daniel Whyte nke atọ, onyeisi oche nke Gospel Light Society na pastọ nke Gospel Light House of Prayer International. Ebumnuche nke oge a bụ ịkụziri ndị kwere ekwe na-eto eto ihe ọ bụla ha chọrọ ịma banyere okwukwe ha na Jizọs Kraịst ma nye ha ihe ọmụma ha chọrọ ibi ndụ Ndị Kraịst.
Amaokwu Baịbụl anyị bụ 1 Ndị Kọrịnt 10:13:
Enwegh i onwunwa dakwasŽ gŽ ma] b ihe dŽka mmad naeme: ma Chineke kwesŽrŽ nt kwasŽobi, Onye náegaghŽ ekwe ka anwa gi kari ihe i nwere ike; ma ọnwụnwa ahụ ga-eme ka ị gbapụ, ka i wee nwee ike ịnagide ya.
--- Ekpere ---
Ihe omuma anyi taa bu "Ot'u esi merie onwunwa, nkebi 59"
N'akụkụ a nke Ndị Kraịst na-eso ụzọ ndị na-eso ụzọ Ndị Kraịst, anyị ga-anọgide na-ele anya ọnwụnwa ụfọdụ ndị dị, dị ka Bible na-ekwu, "ọ bụ mmadụ." Anyị na-ele ihe Bible na-ekwu maka mmehie ndị a ka anyị wee nwee ike ịma ihe ize ndụ ya nakwa ka anyị wee zoo Akwụkwọ Nsọ n'ime obi anyị iji mee ihe mgbe a nwara anyị.
Mmehie nke anyi ga na-ele anya taa bu nmehie nke "ochicho." Nke a bụ mmehie nke atọ na ndepụta nke ọnwụnwa 12 nke sitere na isi mmalite abụọ - otu oge ochie na otu oge. Isi mmalite bụ ndepụta nke ndị mọnk nọ na chọọchị mbụ kpọrọ "mmehie asaa ahụ na-egbu egbu" ma ọ bụ "mmehie mmehie." Isi nke abụọ bụ nchọpụta Barna site na 2011 nke na-enyocha ọnwụnwa kasị elu ndị America kwetara ka ha na-alụ ọgụ.
Taa, anyị ga-anọgide na-ele Jems 1: 13-15 anya. (Cheta na edere ihe ọmụmụ a na ntanetị mgbe ọ bụla klas, ya mere i nwere ike ịga na website GLHOPI.com anyị, pịa "Ndị Kraịst Ndị Kraịst Na-aga n'ihu" ọkọlọtọ na peeji nke obibi, wee malite ịmụrụ amaokwu ndị a site na obi gburugburu izu.)
13 Ka onye ọ bula ghara ikwu mb͕e anēle ya ule, Chineke nwaputaram: n'ihi na Chineke adighi-anwaputa ya n'ihe ọjọ, ọ dighi-anwa kwa onye ọ bula:
14 Ma onye ọ bula anānwa ya, mb͕e anēme ka ọ rapu ya nke-ọma, ọ rafu kwa ya.
Mb͕e ahu, mb͕e obi-utọ di ime, ọ putawo nmehie: ma nmehie, mb͕e emesiri ya, ọ nēme ka ọnwu puta.
Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-agwa anyị na isi iyi kachasị njọ nke ọnwụnwa abụghị ekwensu, ma ọ bụ ụwa, mana anyị onwe anyị. Ọ bụ "ọchịchọ nke onwe anyị" nke na-adọpụ anyị pụọ n'ụzọ dịpụrụ adịgide ma dị warara. Ọtụtụ ndị na-eche na ọ bụrụ na ihe si n'ime ha pụta ma ọ bụ maka obi ụtọ ha, mgbe ahụ, ọ gaghị adị njọ. Ma Akwụkwọ Nsọ na-agwa anyị na ọchịchọ nke dị n'ime "na-amụba ma na-amịpụta mmehie: mmehie, mgbe ọ gwụchara, na-eweta ọnwụ."
Okwu Grik a sụgharịrị dị ka "agụụ" bụ okwu na-akpaghị aka na nke ime mmụọ bụ nke pụtara nanị ọchịchọ nke ọchịchọ siri ike ma ọ bụ ọchịchọ, agụụ na-agụ agụụ ma ọ bụ agụụ siri ike. Mgbe ọchịchọ anyị ma ọ bụ ọchịchọ anyị na-eduzi n'ihe ọjọọ, ọ na-aghọ ọnwale. Ọ bụrụ na anyị agbaso ọchịchọ a ma kwe ka anụ ahụ anyị nweta ụzọ, ọ na-etinye mmehie n'ime uche anyị. Grant Richison na-ede, sị, "Enwere ike dị ukwuu n'echiche ọjọọ. Onye Kraịst aghaghị ịnagide mmehie na ọnwụnwa, ọ bụghị na ebe anyị na-ahọrọ ime mmehie. Ozugbo anyị kpebiri imeghe onwe anyị ka anyị mehie, ihe karịrị mmehie Ọ dịghị onye ọ bụla n'ime anyị nwere ike izere ọnwụnwa, ọ bụghị mmehie iji nwaa ịnwa ma ọ bụ mmehie nke ga-adakwasị ọnwụnwa. echiche ọjọọ ga-amụ anyị n'uche ruo mgbe anyị ga-aga izute Onye Nzọpụta. telivishọn taa na-enye onye kwere ekwe nnukwu ọnwụnwa. Lust na-abịa na-agbaba anyị n'uche site na ụgbọala ndị a, ọ na-abịa na mberede na ngwa ngwa. " Mmetụta ndị ahụ na-ejikọta ọchịchọ anụ ahụ, nke anụ ahụ anyị, na-ekepụta ọgwụ dị egwu nke ọnwụnwa. Otú ọ dị, anyị agaghị ekwenyere ya.
Ọ bụrụ na anyị anabata ọnwụnwa na mmehie, Bible na-agwa anyị na "mmehie, mgbe e mechara, na-eweta ọnwụ." Okwu Grik a sụgharịrị ịbụ "okokụre" pụtara "tozuru oke." Ụmụ nwanyị na ụmụ nwoke, mmehie bụ ihe dị ndụ. Ọ nwere ike ịmalite obere nwantakịrị n'ime ndụ anyị, ma ọ bụrụ na anyị adịghị egbu ya ngwa ngwa, ọ ga-eto eto dị ka nwa agbọghọ siri ike, na-achọghị ịgbanwe, n'ikpeazụkwa onye toworo eto, na-agbaso ụzọ ya. Mmehie nke a na-enye ohere imegharị ma na-ebute ọnwụ. Maka onye kwere ekwe, nke a pụtara nkwụsị nke Mmụọ Nsọ na ndụ ya na ịkwụsị mmekọrịta ya na Chineke. Steven Cole kwuru, sị, "James na-egosi na mmehie anaghị akwụsị akwụsị. Ọ na-eme ka ọ bụrụ nke na-aga n'ihu na ọnwụ ya. ọ bụrụ na anaghị edozigharị ngwa ngwa, ọ nwere ike ibute ọdịda nke mmiri ozuzo niile, na-akpata mbibi dị egwu. "
Ekwela ka ọchịchọ gị na-eduba n'ọnwụnwa. Ekwela ka onwunwa mee mmehie. Ekwela ka mmehie buru ọnwụ.
Ọ bụrụ na ị na-alụ ọgụ na ọchịchọ ọ bụla ma ọ bụ mmehie ọ bụla, were akụkụ a gaa n'obi wee malite iji ya n'oge ọzọ ị na-eche ọnwụnwa ahụ ihu.
Ọ bụrụ na ị maghị Jizọs Kraịst dịka Onyenzọpụta gị, Jọn 3:16 na-ekwu, "N'ihi na Chineke hụrụ ụwa n'anya otú a, na O nyere ọbụna Ọkpara Ọ mụrụ naanị Ya, ka onye ọ bula nke kwere na Ya we ghara ila n'iyi, kama ka o nwee ndụ ebighi ebi."
Akwụkwọ Nsọ na-ekwukwa na Ndị Rom 10: 9 na 13: "Ọ bụrụ na ị ga-ekwupụta na ọnụ gị Onyenwe anyị Jizọs, ma ị ga-ekwenye na obi gị na Chineke mere ka o si na ndị nwụrụ anwụ bilie, a ga-azọpụta gị .... ga-akpọku aha Onyenwe anyị ka a zọpụta ya. "
Ọ bụrụ na ị kwenyere nà Jizọs Kraịst nwụrụ n'obe maka mmehie gị, e liri ya ma bilie na ndị nwụrụ anwụ, ma ịchọrọ ịtụkwasị Ya obi maka nzọpụta gị taa, biko kpeere m ekpere a dị mfe: Nna dị nsọ bụ Chineke, ana m aghọta na m m bụ onye mmehie nakwa na m mere ụfọdụ ihe ọjọọ na ndụ m. O wutere m maka mmehie m, achọrọ m ịhapụ mmehie m. Maka Jisos Kraist, biko gbaghara m nmehie m. Ugbu a ka m ji obi m dum kwenye na Jizọs Kraịst nwụrụ maka m, e liri ya, ma bilie ọzọ. M tụkwasịrị Ya obi dịka Onye Nzọpụta m ma soro Ya dịka Onyenwe anyị site na taa gaa n'ihu. Onyenwe anyi Jisos, biko bata n'ime obi m wee zoputa nkpuru obi m ma gbanwee ndu m taa. Amen.
Ọ bụrụ na ị tụkwasịrị obi na Jizọs Kraịst dịka Onyenzọpụta gị, ị kpere ekpere na ekpere ma jiri obi gị kwupụta ya, m na-ekwusara gị na dabere n'Okwu Chineke, a na-azọpụta gị ugbu a site na Hel na ị ga-aga Eluigwe. Nabata na ezinụlọ nke Chineke! Achọrọ m ikele gị maka ime ihe kacha mkpa ná ndụ ma na ịnweta Jizọs Kraịst dịka Onyenzọpụta gị. Maka ozi ndị ọzọ iji nyere gị aka ito eto na okwukwe ọhụrụ gị n'ime Kraịst, gaa Oziọma Light Society.com ma gụọ "Ihe Ị Ga-eme Mgbe Ị Banyesịrị n'Ụzọ". Jizọs Kraịst kwuru na Jọn 10: 9, "Abụ m ọnụ ụzọ: site na m ma ọ bụrụ na onye ọ bụla abata, ọ ga-azọpụta, na ga na-aga na na, na-achọta ịta nri."
Ruo oge ọzọ, Ka Onyenwe anyi Gọzie Gi!